2014 nwere ike ịbụ afọ anyị niile kwụsịrị ịchụ ihe na-egbu maramara ma laghachi na usoro ịzụ ahịa na-agba mbọ na eziokwu? Nnaa, Atụrụm anya na saw anyi huru otutu ulo oru chua ufodu ndi nzuzu na afọ ole na ole gara aga. Site na oge mmefu ego ha kpọnwụrụ na enweghị nsonaazụ, ọ bụ ya mere ha ga-eji kpọọ anyị oku. Enwere ọtụtụ ịgụta ọnụ ma tụgharịa afọ m na-ele ụfọdụ ụlọ ọrụ teknụzụ na ụlọ ọrụ na-atụ egwu ihe na-enweghị ego na ọtụtụ mmefu ego nke obere azụmaahịa na-akwụwa aka ọtọ.
11.05% chọrọ iji hụ na mbọ ha na-agba ịre ahịa email anaghị akwụsị na nzacha spam ma ọ bụ taabụ Gmail.